मधुमेह रोग के हो ? मधुमेह रोग मोटो मानिसलाई मात्र हुन्छ भन्ने होइन - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / स्वास्थ / मधुमेह रोग के हो ? मधुमेह रोग मोटो मानिसलाई मात्र हुन्छ भन्ने होइन
मधुमेह रोग के हो ? मधुमेह रोग मोटो मानिसलाई मात्र हुन्छ भन्ने होइन
By Digital Khabar on July 28, 2017
डा. अलर्क देवकोटा (रजौरीया)
मधुमेह, हर्मन र थाइराइट रोग विशेषज्ञ
वीर अस्पताल/नेपाल डाइबिटिज थाइराइड सेन्टर (नयाँ बानेश्वर)
प्याङ्क्रियाज ग्रन्थिबाट स्वाभाविक रूपमा उत्पादन हुने इन्सुलिन हर्मोनको मात्रा कम भई इन्सुलिन सही मात्रामा उपयोग हुन नसक्नु वा शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कम भएका का
रणले खानाबाट प्राप्त हुने चिनी ऊर्जा शक्तिको रूपमा परिवर्तन हुन नसकी रगतमा थुप्रिन थाल्छ । शरीरका अंगहरू ऊर्जा अभावले कमजोर हुन पुग्छन् । यस्तो अवस्थालाई मधुमेह भन्ने गरिन्छ ।
किन लाग्छ मधुमेह ?
आजभोलि मानिसको जीवनशैली बदलिएको छ । खानपान र रहनसहनमा फेलबदल आएको छ । जसले गर्दा मधुमेहका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । पहिला–पहिला युरोप, अमेरिकामा देखिने यो रोग आजभोलि संसारभर फैलिएको छ । आजकल मानिसले खानामा फास्टफुड प्रयोग गर्न थालेका छन् । विशेषगरी, सहरतिर चारैतर्फ घर मात्र छन् । व्यायाम गर्ने ठाउँको अभाव छ । अहिले बालबच्चालाई खेल्ने ठाउँको अभाव छ । खानपान र रहनसहनले मधुमेहका बिरामीको संख्या बढेको छ ।
कति वर्षको उमेरमा देखापर्छ ?
पश्चिमा देशमा पहिला–पहिला ३० देखि ४० वर्षको उमेरमा यो रोग देखिन्थ्यो । अहिले ५० देखि ६० वर्षको उमेरमा यो रोग धकेलिएको छ । हाम्रो देशमा सानै उमेरदेखि नै यो रोग देखिन थालेको छ । सुरुवाती दिनमा यो रोग लागेको थाहा नहुन सक्छ । अन्य कुनै रोगको परीक्षण गर्दा मधुमेह लागेका कैयौँ बिरामी फेला परेका छन् ।
कस्ता मानिसलाई लाग्छ ?
मधुमेह रोग मोटो मानिसलाई मात्र हुन्छ भन्ने होइन । यो रोग जसलाई पनि हुन सक्छ । मोटो मानिसलाई मधुमेह हुने सम्भावना बढी हुन्छ । परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तीन पुस्तादेखि नै मधुमेह नभएको भए पनि आजभोलि यो रोग देखिन सक्छ । पसिना नबगाउने, तारेको, भुटेको र मैदाजन्य खाद्यान्न खानाले यो रोग लाग्छ । पदिरापान बढी गर्दा पनि यसले असर गर्छ । घरमा कसैलाई मधुमेह लागेको छ भने यो रोग अन्य सदस्यलाई पनि लाग्न सक्छ । किनकि, यो रोग वंशाणुगत हुन्छ । चार केजीभन्दा बढी तौल भएको बच्चा जन्माउने महिलालाई पछि गएर मधुमेह लाग्ने सम्भावना देखिन सक्छ । गर्भवती हुँदा मधुमेह देखिएको भए त्यस्ता महिलालाई भविष्यमा यो रोग लाग्न सक्छ । उचाइअनुसारको मोटोपन र दैनिक रहनसहन नमिलेमा पनि यो रोग लाग्न सक्छ ।
घरमा जे पाक्छ, त्यही खानुपर्छ । तारेको खाना कम खानुपर्छ । नुनिलो पदार्थ कम खाने । जस्तै– आफ्नो बित्ताको गोलाइमा थाल लिने । जसमा आधा हिस्सा तरकारीले भर्ने । एकचौथाइ खाना र बाँकी अन्य चिज खाने गरेमा राम्रो हुन्छ ।
रोग लागेमा के गर्ने ?
नियमित व्यायाम गर्ने । खाना खाइसकेपछि कम्तीमा दुई घन्टा सुत्नु हुन्न । आधा घन्टा नियमित पसिना आउन्जेल व्यायाम गर्नुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नखाने । आजभोलि ढिलो खाना खाने र छिटो सुत्ने चलन छ । यसो गर्दा सुगर लाग्न सक्छ । बेलुकाको खाना कम खाने र बिहानको खाना बढी खाएमा केही फरक पर्दैन । नियमित औषधि खान नछुटाउने ।
कति समयको फरकमा परीक्षण गर्ने ?
मधुमेहको परीक्षण नियमित गर्नुपर्छ । ३० वर्ष माथिका मानिसले कम्तीमा दुई वर्षको फरकमा मधुमेह परीक्षण गर्नुपर्छ । एकपटक मधुमेह लागेपछि पुनः नियन्त्रणमा आयो भने तीन महिनापछि चेक गर्दा पनि हुन्छ । तर, नियन्त्रणमा छैन भने छिटो देखाउनुपर्छ ।
पाँच अंगको जाँच वार्षिक रूपमा गर्ने
कुनै पनि मधुमेहका बिरामीले वार्षिक रूपमा आँखा, खुट्टा, मिर्गौला, पिसाब र कोलेस्ट्रोलको जाँच अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ ।
मधुमेह लागेमा के हुन्छ ?
यो रोग लागेमा आँखालाई असर गर्छ । हड्डी खिइने समस्या देखिन सक्छ । मिर्गौलामा समस्या हुन सक्छ । मुटुरोग र प्रेसर बढ्ने हुन सक्छ । शरीरका कुनै पनि भागमा घाउ भएमा निको हुन समय लाग्ने हुन सक्छ ।
नेपालमा मधुमेहका रोगी
नेपालमा २० वर्षअघि प्रोफेसर डाक्टर मधुदेव भट्टराईले गरेकोे रिसर्चअनुसार सहरमा १९ प्रतिशत र गाउँमा ११ प्रतिशतमा यो रोग देखिएको थियो । संख्याका आधारमा यति नै भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले यसको गहन अध्ययन भएको छैन ।
सामान्यतया घरमा जे पाक्छ, त्यही खाने । खानामा सलाद बढी खाने । खाना खाएपछि कम्तीमा १५ देखि २० मिनेट नियमित हिँड्ने । दैनिक कम्तीमा ३० मिनेट खलखली पसिना आउन्जेल हिँड्ने । मैदाले बनेको, चिनी हालेको, तारेको र सुर्तीजन्य चिज नखाने । नियमित औषधि खाने । सुगर कन्ट्रोल गर्ने ।
मधुमेह कति हुनुपर्छ ?
खाली पेटको सुगर १०० देखि १२० र खाना खाइसकेपछिको सुगर १४० देखि १८० मा राख्न सक्नुपर्छ । सुगर नियन्त्रणमा आएको छैन भने औषधि खानुको कुनै औचित्य हुन्न ।
कोलेस्टेरोल बढ्न नदिने ११ काइदा
युवावस्थामै कोलेस्टेरोल र प्रेसर
खानपानको आनन्द उठाउनुस तर सन्तुलनमा
के कारण हुन्छ पायल्स ? यस्ता रोगीले के खाने, के…
Related ItemsBusinessdigital khabarHealthInternationalNepalNewsPoliticsWorld
← Previous Story कामअनुसार आहार
Next Story → निरोगी बन्न यस्ता खाना खाने गरौं